Nageenyaafi xumura gadadoo saba keenyaa (xalayaa Banaa) – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNageenyaafi xumura gadadoo saba keenyaa (xalayaa Banaa)
Mudde 28, 2018
Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed,
Muummicha Ministeeraa Ripaabliikaa Dimookiratawaa Itoophiyaa, Finfinnee
Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa,
Prezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Finfinnee
Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed fi Kabajamoo Pre. Lammaa Magarsaa,
Iyyata daddaffiifi watwwaannaa afaan uummata keenyaa taanee, kan isinitti barreessinuuf aangoofi dhageettii qabdan hundatti gargaaramtanii walitti bu’iinsa, hidhaa, ajjeechaafi bara gadadama uummata keenyaatti xumura akka gootaniif ta’a.
Akkuma hundi keenya beeknutti loltoonni Agaaziifi humna addaa Poolisii Somaalee labsii muddamaafi atattamaa mootummaan waggaa darbe labse dawoo godhatee lubbuu uummmata keenyaa kumootaan ajjeesee, ajjeesiaas jira. Kan hawaasni Addunyaa quba hinqabaanne bara 2017 qofatti Lixaafi Baha Oromiyaarraa uummata keenya Miliyyona tokkoo ol ta’utu buqqaafameera; gariinis ajjeefameera.
Bifuma walfakkaatuun, dubartoonni, daa’immaniifi dhiiroonni kuma dhibbaafi shantamaa ol ta’an bara 2017’tti naannoo Somaalee qofaarraa humnaan buqqaafamaniiru. Namootiin humnaan buqqaafaman kunneenis gumaacha uummtichaafi mootummaatiin ona Oromiyaalee garaagaraa keessa qubachiifamanillee beelaafi dhukkubaaf saaxilamanii lubbuun isanii kan darbe lakkoofsaan hedduudha. Ji’oota Fulbaanaafi Onkoloolessaa bara 2017 keessa siqiqiifi hammeenya isaanirra ga’e kanaaf uummanni buqqa’an kunneen yeroo fincilaa turanittis duguuggaan sanyii yeroo lamaaf iddoo qubbannaa isaanii kan yeroo Hamareessaa jedhamu keessatti akka irratti raawwatame ifa galaadha.
ajjeesuun dhiichisaa turaniiruJalqaba bara 2018, humni poolisii addaa Somaalee onaalee Bahaafi Kibba Oromiyaa kan akka Cinaaqsan, Gursum, Baabbileefi Lixa Harargee Bardoodee, Moyaaleefi Boorana deddeebi’uutiin rukutaa tureera. Bitootessa bara 2018 uummanni nagaan lakkoofsaan 30 ol ta’an xinnaa hanga guddaatti loltoota labsii muddamaa yeroo sanaatiin galaafatamaniiru. Balaa kanarraan kan ka’e uummanni 60,000 ol ta’an lubbuu oolfannaadhaaf lafa jireenya isaanii Moyaaleerraa Keenyaatti godaananiiru. Ajajaan waraanaa sababii buqqaatii, baqaafi dararaa uummata keenya 60,000 ta’e sun yeroo ammaa kanallee Moyaalee keessaa aangoorra akka jiru balaa suukkaneessaan dhiyeenya kana Moyaaleetti sabicharratti taasifame nuuf dhugoomsa. Eebila 15, 2018 humni hidhataan poolisii addaa dhiha Harargee Magaalaa Roggeetti daa’imman, dubartootaafi dhiirota 42 ajjeesee kumootaan buqqifamaniiru. Weerara sanaan walqabatee humnootiin poolisii addaa sun KM 200 irra kan caalu daangaa Oromiyaa keessa seenanii alaabaa mataa ofii dhaabbachhuun uummata shororkeessanii ajjeesuun dhiichisaa turaniiru.
Dhiyeenyuma kana bara 2018 Sadaasa 11-18 keessa loltoonni addaa Somaalee Oromiyaa Naannoo Moyaalee haleeluudhaan uummanni keenya 75,000 ol buqqaafamaniiru. Daa’imman, dubartoonniifi maanguddooleen keenya madaa’aniiru; qaamaas hirdhataniiru; ajjeefamaniirus. Mana barnoota uummataa dabalatee Moyyaalee keessaatti manneen 236 ol ta’an balaa uumame Kanaan gubataniiru. Dabalataanis Sadaasa 27, 2018 daa’imman, dubartoonniifi dhiironni Oromoo 20 ol lixa Harargee Cinaaksan keessatti galaafatamaniiru.
Fulbaana darbe bara 2018 keessa waraanni hamaan Lixa Oromiyaarratti banamuun nibeekama. Qabata balaa sanaatiinis uummanni keenya 220,000 ol ta’an naannoo Benishangul Gumuz irraa buqqaafamaniiru. Gariinis ajjeefamaniiru. Namootiin shira hamaan buqqaafaman kunneenis beelaan, mana jireenyaa dhabuun, dhukkuba garaagaraan dararamuun hanga ammaatti kan siqiiqiifi gidira argaa jiraniifi gargaarsa gahaa mootummaa Naannoo Oromiyaafi Federaalaarraa kan hin arganne ta’uun nibeekama. Yeroo ammaa kanatti jeeqama jiru kanarraa kan ka’e keessumaa Wallagga bal’oo hedduu keessaatti manneen barnootaa guutummaatti waan dhaabbateef barattoonni jeeqama hamaa keessa galfamaniiru. Hojiin daldalaafi misoomaas gufateera. Duumessi hiyyumaa saba keenyarra golboobeera. Gochi akkasii kun ammoo kan dhaloota quucarsuufi egeree biyyatti gara yaaddoo hammaataatti aggaamsisudha.
Gochaaleen jeequmsaa Oromiyaa keessaatti qabsiifame kun lola ABO faana walqabsiisuun dhaloota burjaajessuun akka itti fufetti jira. Shirri sabaafi sablammii walitti diruufi walshakkisiisus kan duriirra daran dabalaa dhufeera. Ta’iiwwan gama miidiyaalee garaagaraa kan ABOfi mootummaa gidduutti hokkoraafi shakkii uumsise kunis gaaga’ama hinbarbaachifne biyya sana keessaatti dhaqqabsiiseera. Aadaa seenaa siyaasa biyya Itoophiyaa keessaatti karaa maree nagaa, obsaafi waliif danda’uutiin furmaanni waarayaan argamee kan hinbeekne ta’uu galmeen seenaa darbanii ifa godha. Haata’u malee, waraana abbaa irreewwaniitiin injifannoon battalaa qofti yeroof argamuunsaa seenaalee yaadatamanidha.
Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaafi Dr Abiy Ahmed, mootummaan uummataa isin akka Naannoottis ta’e Federaalaatti ooggantan kun fakkeenyolii abbaa irreewwaanii fokkisoo mootolee darbanii kana akka hinhordofneefi hin taaneef abdiifi kadhannaa keenya yeroo hundaati. Hiree seenaan isinitti kenne kanaanis siidaa nagaa akka dhaabdanii dabartan gonkumaa hinshakkinu. Warana labsuun salphaa ta’uu mala; haata’u malee, gaaga’amaafi kasaaraa dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa akka Oromiyaa, Itoophiyaafi akka ollaa biyya keenyaatti dhaqqabsiifamu tilmaamuun kan nama rakkisu miti.
Mootummaan aarsaa uummataan isinitti kennamee amma isin oogganaa jirtan kun ooggantoota ABO faana akka gadi taa’ee mariyatu hawwii saba Oromoo maraati. Marii nagaafi waarayaa gadi fageenya qabuun wanti hinfuramne hinjiru; hinjiratus. Mareen waliinii kun qaawwaalee jiran mara duuchee uummata Oromoofi Itoophiyaa hunda gara tokkummaa, misoomaafi jaalalaa obboloowwaniitti ceesisa malee kan duuba isin deebisu miti. Amanamummaa jabaa, yaadni mo’ataafi saba ceesisu marii wal-dhaggeettii kana keessaa kan maddudha. Walii galan alaa galan!
Kabajamtoota ooggantoota keenyaa: Karaan gara dimookiraasiitti geessu dheeraa; abdii kutachiisaafi walxaxaa akka ta’e seenaa biyyoota sirna dimookiraasii gadi dhaabaniirraarraa barachuun nidanda’ama. Wal’aansoo deemsa karaa dimookiraatawaa goolabbii injifannoofi walqixxxxummaa sabaaf hundeedha. Tarsiimoon himaammata jijjiiramaa, nagaafi tasgabbaa’inaa kan yeroo ammaa kana Oromiyaafi onaafi kutaalee Oromiyaa hedduu keessaatti argaa jirru kun uummaticha balaarraa hambisuuf jalqabbii cehumsa amansiisaadha jechuun nidanda’ama. Oggansa keessan keessaatti sirna hunda aammataa, dimookiraatawaa, ooggansa nagaafi abdachiisaa kan Oromiyaa, Itoophiyaafi lixa Afriikaa keessaatti akka dagaagsitan garaa keenyaa guutuu ni amanna. Dandeettiifi ga’umsa isin sabaafi sablammiilee ollaa keenyaa jiran mara ofitti aammachuu qabdanirraa kaanee biyya sana addumaan ammoo hiree dhaaba uummataa ABO labsa waraanaarraa akka dandamachiistan ni abdanna; kabajaadhaanis akka raawwattan isin gaafanna. Sirna filannoo karaa nagaatiin hiree uummatichaa murteessus akka diriirsitan hirbuufi imaanaa wareegama qabsoo sabni itti baaseetiin isin yaadachiifanna. Haaluma kanaan jaarmiyaalee siyaasaa maqaa Oromoon socho’an mara walitti akka dhufan taasisuutiin obsa, waldanda’uufi tokkummaan biyya hundee nagaarratti ijaaramte akka taatuuuf gumaacha mataa keessanii akka baatan isin gaafataa, nullee hamma dhumaatti daandii karaa nagaa kana tumsuuf gumaacha hiree keenyaa taasisuuf akka carraaqnu waadaa itti seenne nihaaromsanna. Geggeessummaa, fedha daandii nagaafi bilisummaa sabaaratti owwaannaa taasiftan hundaaf maqaa saba Oromoofi uummata Itoophiyaa maraan galanniifi kabajaan keenya isiniif guddaadha.